Umzi-mveliso we-Backhoe Loader-i-China i-Backhoe Loader abavelisi, abaXhasi
Iimpawu eziphambili zesakhiwo kunye nobuchwepheshe obuphambili obusetyenziswa kwi-WIK388T backhoe loader
WIK 388 Loader backhoe idibanisa oomatshini ezimbini excavator kunye umlayishi. Inayo yonke imisebenzi yesifudumezi kunye nomlayishi. Umatshini omnye unemisebenzi emininzi, ulungele kwaye ubhetyebhetye, kwaye unciphisa iindleko zokuthenga kunye nokusebenzisa iindleko kumatshini wonke. Ngokukhetha i-Deutz, i-Cummins kunye nezinye iinjini ezidumileyo kunye nenkqubo yokuhambisa ye-Carraro yase-Itali. Inokuxhotyiswa ngezixhobo zobunjineli ezincedisayo ezinje ngekhefu, i-anchor drill, i-rammer yentshukumo, njl.
Iimpawu eziphambili zesakhiwo kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji ephezulu kwi-WIK30-25 Backhoe loader
WIK Lohoe backhoe idibanisa oomatshini ezimbini excavator kunye umlayishi. Inayo yonke imisebenzi yesifudumezi kunye nomlayishi. Umatshini omnye unemisebenzi emininzi, ulungele kwaye ubhetyebhetye, kwaye unciphisa iindleko zokuthenga kunye nokusebenzisa iindleko kumatshini wonke. Ngokukhetha i-Deutz, i-Cummins kunye nezinye iinjini ezidumileyo kunye nenkqubo yokuhambisa ye-Carraro yase-Itali. Inokuxhotyiswa ngezixhobo zobunjineli ezincedisayo ezinjengekhefu, i-anchor drill, i-rammer yentshukumo, njl.